I-SDS Plus Chisel Point kunye neFlat kunye neGouge Bit yeKhonkrithi
Isando sokuqhuba isuntswana
I-Ceramic kunye neGlass Drill Bit
I-Woodworking Drill encinci
HSS Twist ukuzama ukuzama
Umatshini wokumba iBit
Qhuba iseti yeBit
Ikhonkrithi Hole Saw
Ngokhuni Hole Saw
Yodongwe & Glass Hole Saw
1. Ukuzilola komda wokuzilola-sebenza ngokukuko nangaphezulu kunye nexesha elide kunye netshizili efanayo, akukho kuphinda ulole okanye uphinde wenze lukhuni luyimfuneko.
2. Ukuthenjwa okungcono- ezi bitshi ze-chisel zenziwe nge-alloy yentsimbi ephezulu, ebalulekileyo xa ufuna ukungqinelana kunye nokuthembeka.
● Ukususa i-weld spatter, isikali kunye nefomwork formflow overflow okanye seepage.
● Ukujongwa kwikhonkrithi.
● Ukusetyenziswa kwee-jackhammers zombane, i-breakers okanye ihammer ejikelezayo.
● Izinto eziphathekayo: 40Cr
● Uhlobo lwentloko: Indawo / iflethi / iflethi ebanzi / igouge
● Uhlobo lwe-Shank: i-SDS PLUS
● Ububanzi: 14-18 mm (Ubungakanani obuqhelekileyo) - Inokwenziwa ngokwezifiso.
1. Amandla aQhekezayo aPhuculweyo- uxhulumaniso olongezelelekileyo lokudlulisa amandla amakhulu ukusuka kwisixhobo ukuya kwi-chisel.
2. Intloko nganye yeNkulumbuso ibunjwe ngokukodwa kwaye inyangwa ngobushushu, eyilelwe ukusika, ukukala kunye nokususa umphezulu womhlaba omkhulu.
3. Thintela amaxabiso asezantsi kunye ne-Chisel esemgangathweni esezantsi kunye neebhithi zencoko ezinxiba ngaphambi kwexesha kunye nesixhobo samandla, okukhokelela kwizinga lokusetyenziswa okuphezulu, ukulibaziseka kokugqitywa kweprojekthi, ukudilizwa okungafunekiyo nokwenza ukuba ukusikwa ngokubanzi kube nzima ngakumbi. I-JS-TOOLS 'Iishelisi ezizodwa ziyanyangwa ngobushushu kwaye zenzelwe amandla angenakulinganiswa kunye nokuphila ixesha elide, kuyilo lwayo olubukhali lwefuthe lobuninzi.
4. Ububanzi obuninzi nobude obukhoyo-sebenzisa amasuntswana amafutshane ukuhambisa amandla angcono kunye nokwanda kwexesha elide, kunye nexesha elide ekugqobhozeni nzulu okanye ukufikelela kwiindawo ezixineneyo.
5.I-Tungsten Carbide Point, i-Flat Chisel kunye ne-Scaling Chisel yokudiliza ngokulula kuyo yonke into yokwakha, ikhonkrithi, izitena, i-tile kunye ne-cinder block application.
Inkcazo Ubungakanani Inkcazo Ubungakanani
Inqaku / iGouge chisel 14 * 250 Iflethi / Ebanzi I-chisel yeflethi 14 * 250 * 40
* 1) iyunithi: mm
* 2) obunye ubungakanani bukhululekile ukubonisana
1 x Chisel / Ityhubhu yePlastiki
Ukupakisha nako ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zakho. Wamkelekile kunxibelelwano.
1. I-chisel kufuneka ilungiswe kakuhle kwisixhobo samandla.
2. I-JS-TOOLS Point Chisel ichitha kwaye iqala imingxunya kwizilayiti zekhonkrithi, izitena, udaka, isileyiti, ubumbeko, nazo zonke iintlobo zamatye. I-JS-TOOLS Flat Chisel imiphetho, iitshipsi, izikali okanye amajelo ekhonkrithi, ilitye, ulwakhiwo kunye nezitena. I-JS-IZIXHOBO Gouge Chisel isusa isikali, umhlwa, ikhonkrithi, ulwakhiwo, izitena, amatye kunye ne-weld spatter okanye isusa isixa esikhulu sezinto.
Chisel yeNdawo Amacwecwe ekhonkrithi Isebenza kakhulu
Umdaka Isebenza kakhulu
Isitena Isebenza kakhulu
Isilayidi Isebenza kakhulu
Umsebenzi wobugcisa Isebenza kakhulu
Amatye Isebenza kakhulu
Iflethi / Ububanzi beNdlu yeFlethi Ikhonkrithi Isebenza kakhulu
Ilitye Isebenza kakhulu
Gouge Chisel Ikhonkrithi Isebenza kakhulu
Isikali Isebenza kakhulu
Umhlwa Isebenza kakhulu
Isiqwenga seWeld Isebenza kakhulu
I-SDS yeChisel encinci
I-SDS Max Chisel Bit yeKhonkrithi kunye neLitye
65A Shank Breaker Chisel kunye nePunch yeKhonkrithi
I-Hex Shank 0810 Chisel Bit Stone Izixhobo zokuKrola
Uya IJS yakho